WARBIXIN: 8 Arimood Oo Fure U Ah Ku Guulaysiga Barcelona Ee Horyaalka La Liga Xilli Ciyaareedkan – Wararka Ciyaaraha Maanta
WARBIXIN: 8 Arimood Oo Fure U Ah Ku Guulaysiga Barcelona Ee Horyaalka La Liga Xilli Ciyaareedkan
April 8, 2019 kooxda La Liga, Wararka Maanta, Warbixino 0
Kooxda Barcelona ayaa si aad ah ugu sii dhawaanaysa ku guulaysiga horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan kadib guushii ay ka gaadhay kooxda Atletico Madrid Sabtidii.
Barcelona ayaa haatan 11 dhibcood ku haysa horyaalka La Liga iyaga oo haatanba hal gacan ku sii qabsaday horyaalka La Liga iyaga oo labada kulan ee soo socda ku guulaysan kara.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa 8 arimood oo sabab u ahaa ku guulaysiga horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan.
Goolhayaha reer Germany ayaa shaki la,aan soo qaatay xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa intii uu joogay kooxda Barcelona isaga oo kooxdiisa u badbaadiyay dhibco tiro beel ah waliba muujiyay in uu ka mid yahay goolhayayaasha ugu fiican adduunka.
Mar walba oo ay kooxaha kale khatar ku noqdaan rajada Barcelona ee horyaalka La Liga, Barcelona ayaa ka jawaab bixinaysay iyaga oo waliba si cajiib ah ugu jawaab bixinaya waliba guulo gadhay kulamada waaweyn ee sida Atletico Madrid iyo Ral Madrid.
Lama Filaanka Clement Lenglet:
May jirin cid filaysay in uu xiddiga reer France laf dhabar u noqdo kooxda Barcelona kadib dhaawacii Samuel Umtiti iyada oo cid walba saadaalinaysay in uu ku dhibaatoon doono Barcelona laakiin xiddiga ayaa lamaane daafac oo cajiib ah la sameeyay daafaca Gerard Pique.
Dhibaatada Real Madrid:
Mar kale ayay Real madrid si dhib yar uga hadhay tartanka loogu jiro horyaalka La Liga iyada oo Los Blancos si aad ah ugu dhibaatootay in ay Barcelona kula tartanto horyaalka La Liga xilli ay kooxdu wajahday dhibaatooyin aad u badan xilli ciyaareedkan.
Maamulsita Ernesto Valverd:
Muhiimada tababaraha ayaan shaki la galin karin, waxa uu khibrad fiican u leeyhay qaabka ay u ciyaaraan xiddiguhu cidna su,aal kama keeni karto qaab ciyaareedkiisa, xiddigaha kooxda ayaa jecel tababaraha waxana qanciyay xitaa xiddigaha daqiiqadaha yar ciyaaray xilli ciyaareedkan.
Shaki la,aan xiddig dhaliyay 33 gool iyo waliba 14 caawin 31 kulan oo uu ciyaaray waa furaha kooxda ee 1-aad, Lionel Messi ayaa soo qaatay sanad kale oo cajiib ah iskuna muujiyay adduunka in ayna jirin cid qaban karta ama uuna soo bandhigi karin qaab ciyaareed liita.
Waxa jirtay marar aad u yar oo uuna Lionel Messi kooxda u qaban shaqo fiican laakiin waxa badbaadiyay xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Luis Suarez sida Kulamadii Villarreal, Atletico Madrid waxana uu xilli ciyaareedkan dhaliyay 20 gool uo waliba 6 caawin.
Hadii uu Lenglet ahaa lama filaanka xilli ciyaareedkan, Arthur Melo ayaa dhankiisa ahaa xiddig is badal weyn ku sameeyay kooxda, inkasta oo uuna wali sanad buuxa ku qaadan yurub hadana waxa uu u muuqdaa mid horumar fiican sameeyay lana odhan karo waxa uu noqday saxiix lagu guulaystay.